ए सिंहदरवार निर्मलाका बा आमालाई न्याय कहिले ? निर्मलाका नाममा दीप प्रज्वलन – YesKathmandu.com
ए सिंहदरवार निर्मलाका बा आमालाई न्याय कहिले ? निर्मलाका नाममा दीप प्रज्वलन
काठमाडौं । अपराध गर्ने पक्राउ परेका छैनन । पिडा भोग्ने उच्च घरानाको होइन एउटा आम मान्छे, न्यायको लागि कन्चनपुरदेखि काठमाण्डौं सम्म भौतारिएका छन निर्मलाको आमाबुवा तर पनि खै कस्ले न्याय देला, समाजमा न्याय मरिसकेकै होत ? कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको लागि न्याय माग गर्दै बिहीबार काठमाडौंको माइतीघरमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ ।
निर्मलाका लागि न्यायनामक अभियानको आयोजनमा गरिएको द्वीप प्रज्वलनमा न्यायका लागि काठमाडौं आएका निर्मलाका बुबाआमा अश्रुधारा बगाउँदै सति साल झै उभिएका थिए । सरकार न्याय समानता र सुशासनको नारा दिएर थाक्दैन तर महिनौ वित्दापनि निर्मलाका आमाबुवाले न्याय पाउन सकेका छैनन ।